ဘကြီးပြောသော …အကွက်… အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ဘကြီးပြောသော …အကွက်… အကြောင်း
ဘကြီးပြောသော …အကွက်… အကြောင်း
Posted by Shwe Myine Thar on Sep 2, 2011 in Short Story | 11 comments
ဘကြီး ပြောသော အကွက်
ဒီနေ့ညနေအလုပ်ကအပြန် အိမ်ရောက်တော့ တောကတက်လာတဲ့အမျိုးတွေရောက်နေတယ်….
ကျွန်တော်လဲခဏနားရေချိုး ပြီးတော့ဧည့်သည်တွေနဲ့အတူထမင်းစားပြီး အိမ်ရှေ့ထွက်စကားပြောရင်း TV ကြည့်ရင်းမရောက်ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ မွေးရပ်မြေကအကြောင်းလေးတွေပြောနေကြစဉ်
ကျွန်တော်ကိုဘကြီးကဟာငါ့တူမင်း TV ကြီးလဲလိုက်ပါလား….ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်သွားတယ် …
ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ ဟိုမှာလေမင်း TV မှာအကွက်ထနေပြီမီးလုံးလဲလိုက်တော့
ဆိုတော့ကျွန်တော် TV ဘက်ကြည့်တော့ MRTV-4 ကလာနေတဲ့အဆိုတော်——–သီဆိုဖျော်ဖြေနေစဉ်ဆင်ဆာဖြတ်ထားတဲ့ အကွက်လေးကပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ဆိုတော့ သူက TV မကောင်းဘူးလို့ထင်သွားတာပါ…….
အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်း ဘကြီးရေအဲဒါ TV မကောင်းတာမဟုတ်ဘူး မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့မညီတဲ့ဝတ်ပုံစားပုံနဲ့ဖြစ်နေလို့
ကောင်မလေးတွေအတုယူမှာဆိုးလို့ အမြင်မတော်တာတွေမမြင်အောင်လို့ကာထားတာပါဟု အစရှိသ၍
ဟာမင်းကလည်းအဲဒီလိုဖြတ်လို့မသိတာမှမဟုတ်တာ သိနေတာပဲ အစကတည်းကအဲဒီလိုဝတ်ပြီးမရိုက်နဲ့ပေါ့… အခုဟာကဟိုကွက်ဒီကွက်နဲ့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေပါဘူး အဲဒါကြီးမကြည့်ပဲတစ်ခြားဟာပြောင်းကွာဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲ တစ်ခြားနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်လိုင်းပြောင်းပေးလိုက်တယ် အဲဒီမှာလဲ TV ကအကွက်နဲ့ပြန်ပဲ
ဒါပေမဲ့ဘကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ သူများနိုင်ငံက ရုပ်ရှင်ကားကျတော့သွားတားလို့မှမရတာ အဲဒါတော့ထားလိုက်ပါတဲ့ မသင့်တော်တာတွေပါရင်တော့မပြတာကောင်းတာပေါ့ ကလေးတွေအတုယူကုန်မှာ
တောသူတောသားများဟာ ရိုးသားပွင့်လင်းကျတယ်…. မသိတာကိုမသိ မရှိတာကိုမရှိပဲ ……
ကျွန်တော်နှင့်ဘကြီးတို့ နယ်အကြောင်းဆက်ပြောကာ လက်ဖက်လေးစား ရေနွေးသောက်
ရုတ်တရက် အကွက်လွတ်ချိန်ကို မျက်တောင်မခတ် စောင့်ကြည့်ရတာ အမော
သူတို့ အကွက်နဲ့ကာတော့မှ ဒါမကြည့်သင့်လို့ပဲဆိုပြီး ပိုသတိထားကြည့်မိတယ်
နောက်ပြီးရှိသေးတယ် ဟိုနေ.က MRTV-4 က ကိုရီးယားကားထဲမှာ
အင်း … ကြုံတုန်းပြောရဦးမယ် … ကိုရီးယားကားထဲမှာ ပါတဲ့ မင်းသမီး ဆိုဂျုသောက်တာကို ခွက်ကိုင်တဲ့လက်ရော ခွက်ရော ၀ါးပြထားတယ် … ။ အများကြည့်စေချင်အောင်လို့ တမင် မီးမောင်းထိုးပြသလား မှတ်ရတယ် … ။ နောက်တစ်ခု … အရင်TV က လာတဲ့ ကာတွန်းလေးထဲမှာ … အရုပ်ကလေးက ခါးပေါ်နေတာ … ကာတွန်းရုပ်မို့ ကြည့်ကောင်းသားနဲ့ကို … အရုပ်ကိုပါ ခါးပေါ်တဲ့နေရာ လိုက်ဖျက်တယ် … တကယ် ….တကယ် ဘယ်လို အတွေးတွေလဲ မမှန်းတတ်တော့ဘူး … ။
အ၀တ်အစားလောက်ကိုတော့ ကြိုပြီး ဆင်ခြင်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါမှ အကွက်တွေပျောက်သွားမှာပါ။
ခေတ်ကိုမြင်အောင်ပြောနိုင်တဲ့ ရွှေမြိုင်သားပါလား။ကျေးဇူးဘဲနော့။ခုလိုမျိုး ဝေမျှတော့ ကလေးတွေအတွက်ကောင်းပါတယ်။
အကွက်ဆိုလို့ ဘာများလဲလို့….၊ ဘာမှမဟုတ်ပါလားနော် ၊ သဘာဝကိုသူတို့မို့တားချင်တာ ။
အိုး အသင်လောကကြီး……………..ခက်လိုက်တာ ။
ရိမ်းဘိုး ဆိုလား ဘာလား
စလောင်းက လာတာ လေ
ကွက်ကွက် လေးတွေ ကြည့်ဖူးတယ်
အိမ်က လူကြီးတွေ လာလို့ 
ခုနောက်ပိုင်း တော်တော်ဆိုးလာတယ်။ သူတို့လည်း ဖျက်မယ့်နေရာကို ကာရတာ အတော်မောမှာပဲ ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့လေ… ဖုံးတဲ့နေရာကို အပြေးလိုက်ဖုံးနေရတာ။ အရင်ထဲက ကန့်သတ်ချက်နဲ့ထားရင် ဒီလောက်ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်မဖြစ်ဘူး။
ဒီကဘကြီးကဘယ်ရွာကလဲ … တစ်ချို့ရွာတွေမှာ TV တွေရှိပါတယ်နော် အဲဒီ့လောက်ခေတ်နောက်ကျတဲ့
ဘကြီးကရှိသေးလား ဒီက shwe myine thar က နိုင်ငံခြားလိုင်းတောင်ဖမ်းကြည့်နိုင်သေးတာပဲ။ ဘကြီးကို
second hand TV လေးတစ်လုံးလောက်ရွာအပြန်လက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါလား ။လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ
ဈေးကျနေတာပဲ ။အဲဒါမှဘကြီးလည်း ဗဟုသုတကြွယ်လာမှာပေါ့….
ခါးမှန်သိရင် အစက မစားနဲ့ပေါ့…။ မှားမှန်သိရင် အစက မသွားနဲ့ပေါ့…။ ခါးမှန်းသိလျက်နဲ့ ဘာလို့ စားခဲ့လဲ ….။ မှားမှန်းသိရက်နဲ့ ဘာလို့ စားခဲ့လဲ…။ အဲဂလိုဖစ်နေပြီ…။ ပြလည်းပြချင်တယ်…။ မြင်မှာလည်းကြောက်တယ်ဆိုတာမျိုး ………. ဟင်းးးး တိတ်ညစ်တယ် တိတ်ညစ်တယ်ဗျို့…………..။
ပြောရမယ်ဆိုရင် တော်ရုံတွေကိုလည်း ခေတ်နဲ့အညီ ခွင့်ပြုပေးသင့်တယ်။
ဘာမဟုတ်တာလေးတွေကို လိုက်ကွက်ပြနေပြီးတော့ ပေးချင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကျတော့မှ သူ့ဆီကငါလု၊ ငါ့ဆီကသူလု ဖြစ်နေတယ်။
ဟိုးးးးးးးးး အရင်ကပြပေးတဲ့ ပေါင်ချိန်တို့ ကျန်ကျောင်းတို့ကိုတောင် သတိရမိသေးတော့တယ်။